Iindaba -Uzihlengahlengisa njani iigiya zakho
Ukuba ukufumanisa kunzima ukukhetha iigiya ibhayisekile yakho ye-Insync inokufuna uhlengahlengiso oluthile
Beka i-gear lever kwizixhobo eziphezulu, jika iipedali kwaye uvumele ikhonkco ukuba liye kwelona cog lincinci lincinci ngasemva kwebhayisekile. Ukuba kukho isixhobo sokulungisa intambo kumzimba we-lever yegiya, okanye kumzimba we-derailleur, yijije phantse kuyo yonke indlela (ngokwewotshi).
Hlengisa i-bolt ekhusela i-bolt kwi-derailleur kwaye uhambise intambo endleleni.
Phakamisa ivili langemva emhlabeni, kuya kufuneka isibini esongezelelweyo sezandla. Jika iipedali ngelixa usebenzisa esinye isandla sakho ukutyhala ngesandla i-derailleur yangasemva ukuya kwivili elingasemva. Ukuba uhlengahlengiso lwangaphakathi lwe-derailleur luhlengahlengiswe ngokuchanekileyo, itsheyini liya kuhamba kuphela kwinkungu enkulu kwaye lingabi saqhubeka. Ukuba ihamba ngaphaya kwelo cog kwaye iwele kwizipikha, jika i-derailleur yokulungisa isikrufu (ngokwewotshi) kwaye uphinde eli nyathelo. Ukuba ityathanga alihlali kamnandi kwelona cog likhulu, qhoboshela isikrufu sokuhlengahlengisa kancinci kwaye uzame kwakhona.
Nje ukuba wonwabe yiloo nto, vumela isiporo sedreyilleur ukuba sityhalele i-derailleur ngaphandle iye kwi-cog encinci. Kwakhona ukuba itsheyini liyaphuma, okanye alihlali kakuhle kwesona sikhombi sincinci, jika olunye uhlengahlengiso ukuze uhambise indawo ye-derailleur.
Xa uhambo lwe-derailleur luhamba kamnandi phakathi kweecog ezinkulu nezincinci, phinda intambo yegiya kwaye wenze ukhuseleko.
Sebenzisa i-lever gear, hamba kuwo onke amagiya amatyeli aliqela. Ukuba i-derailleur iyacotha ukuya kwi-cogs ezinkulu, cima isixhobo sokulungisa intambo kumzimba we-derailleur. Ukuba kuyacotha ukuya ezantsi kumagiya amancinci, isikripthi kwisixhobo sesekethe. Phinda ujonge ukuba zonke iibholiti ezikhuselekileyo zixinene kwaye uye kukhwela uvavanyo olunobulali.
Ixesha Post: Oct-08-2021